कोरोनाबाट बच्न हामी आफै सचेत बनी सावधानी अपनाउनुपर्छ - betanadaily.com
सन्तोष बिक (स्वास्थ्य सहायक,बेलबारी नगरपालिका मोरङ )
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २४, २०७७ समय: ४:४२:५३
बेलबारी । विश्वमा कोरोना रोगको संक्रमण फैलिएसँगै बेलबारी नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठन गरेको कोभिड १९ स्वास्थ्य समितिको संयोजक रहनुभएका स्वास्थ्य सहायक सन्तोष गहतराज (बिक) यो महामारीको बेला दैनिक १९ घण्टा काममा खटिरहनुभएको छ । त्यसैपनि सदैव ब्यस्त रहने स्वास्थ्यकर्मीहरुको जीवन यो महामारीपछि थप कष्टपुर्ण र संघर्षमय बनेको छ ।
दैनिक नगरभित्रका बिभिन्न वडामा देखिएका स्वास्थ्य समस्या र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका र होल्डिङ एरियामा बसेका ब्यत्तिहरुलाई नगरपाकिलाको क्वारेन्टाईन सम्म ल्याउने र त्याँहा रहेका ब्यत्तिहरुको परिक्षणका लागि ब्यबस्थापन गर्दै उहाँको हरेक दिन बित्ने गरेको छ । बि.स २०३८ सालमा साउन २ गते मोरङको केराबारी ७ बालेमा मातापिता भद्रसिंह र आईतमायाको कोखबाट जन्मिनुभएका उहाँले बिराटनगरस्थित बिराट हेल्थ कलेजबाट हेल्थ असिस्टेण्ट (एचए) सम्मको अध्यायन पुरा गर्नुभएको छ ।
बि.स २०६६ सालमा स्थायी रुपमा जागिरे भएपछि उहाँले बिभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै २०७४ साउन २० गतेबाट बेलबारी नगरपालिकामा स्वास्थ्य सहायकका रुपमा कार्यरत रहनुभएको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण सँगै बदलिएको परिस्थिति र नगरपालिकाको योजना सहित भईरहेका पहलका बिषयमा उहाँसँग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंशहरु –
यो बिपतका बेलामा कति घण्टा काम गरिरहनुभएको छ ?
यति समय काम गर्ने भन्ने नै छैन । आबश्यत्ता अनुसार काममा खटिने हो । कहिले काँही त १९ घण्टासम्म काम गरिरहनु परेको छ । राति केही समय आरामको समयमा पनि फोनबाटै भएपनि काम गर्नुपरिरहेको छ । यति समय भन्ने नै छैन ।
कोरोना भाईरस (कोभिड १९) सँगै यहाँको ब्यस्तता बढेको हो ?
स्वास्थ्यकर्मीको ब्यस्तता सधै उस्तै नै हुन्छ,तरपनि कोरोना संक्रमण बढेपछि थप ब्यस्तता बढेको पक्कै पनि हो । किनकी हामी सदैब स्टेण्ड बाईको अबस्थामा छौँ । शुरुमा भन्दा अहिलेको अबस्था कष्टपुर्ण र जटिल बनेको छ ।
बेलबारीमा कोरोना संक्रमणको अबस्था के छ ?
बेलबारीमा हालसम्म ५ जना क्वारेन्टाईनमा बसेका र एकजना समुदायका गरी जम्मा ६ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसमा ४ जना निको भएर घर फर्किनुभएको छ भने २ जना उपचाररत हुनुहुन्छ । उहाँको अबस्था पनि सामान्य छ ।
कोरोना संक्रमण र रोकथामका लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएर होल्डिङ एरियामा बसेका ब्यत्तिहरुलाई नगरपालिकाले आफनै गाडीमा हालेर क्वारेन्टाईनसम्म ल्याउने र उनीहरुको परिक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ । साथै समुदायमा कोरोनाबाट बच्नका लागि जनचेतनामुलक सन्देश प्रबाह,माईकिङ समेत गरिरहेको छ ।
जनचेतनामुलक सन्देश भन्नाले के प्रवाह गरिएको छ ?
कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको सावधानी नै हो । हामीले सावधानी अपनायौँ भने यो रोगबाट सहजै बच्न सकिन्छ । त्यसका लागि माक्सको प्रयोग,कम्तिमा २ मिटरको डिस्टेन्स,नियमित हात धुने र भिडभाडमा नजाने लगायतका साबधानी अपनायौँ भने हामीलाई कोरोना लाग्दैन । त्यसैले यस्ता साबधानीका उपाय सहितका सुचना र सन्देशहरु माईकिङ लगायत गरी सावधानी अपनाईरहेका छौँ ।
बेलबारी नगरपालिकाले निर्माण गरेको आईसोलेसन बेकामे भयो भन्ने आरोप छ नी ?
आईसोलेसन बेकामे भएको छैन । अब चाँहि यस्को काम आएको छ । कोरोना संक्रमित बढदै गएपछि नगरपालिकाले निर्माण गरेको आईसोलेसन अब प्रभावकारी बन्ने दिन आएको छ । आईसोलेसनमा पक्कै पनि केही सामाग्रीहरु अपुग छन,ती सामाग्रीहरु समेत ल्याएर यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने छ । यहाँका बिरामीहरुलाई यहि सेवा दिने हिसावले केही दिनमै हामी आईसोलेसन सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ ।
क्वारेन्टाइनको अबस्था चाँहि के छ ?
बेलबारी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेनटाईन हामी त भन्छौँ । अन्यत्र भन्दा धेरै राम्रो छ । सफा छ,ब्यबस्थित छ । सुबिधा सम्पन्न हुनुका साथै स्वास्थ्य खानेकुरा देखि शुद्ध पिउने पानीको ब्यबस्था समेत छ । हामीले उनीहरुको सुबिधाका लागि वाईफाईको समेत ब्यबस्था गरेका छौँ । समग्रमा हाम्रो क्वारेन्टाईन अन्यत्र हेरेर नमुना नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
समुदायमा कोरोना फैलिने त्रास कत्तिको छ ?
अहिले नै त्यो अबस्था छैन । एकजना समुदायका ब्यत्तिलाई भेटेको छ । हामीले अन्य केही ब्यत्तिको समेत स्वाब परिक्षणका लागि पठाएका छौँ । समुदायमा कस्तो अबस्था छ भनेर हामीले केही प्रहरी,नापी कार्यलय,बिद्युत प्राधिकरणका केही कर्मचारीको स्वाब समेत परिक्षणका लागि पठाएका छौँ । त्यसको रिपोर्टपछि अबस्था भन्न मिल्छ । प्रस्तुति – नरेन्द्र बस्नेत